Ciidanka XDS oo howlgallo ka dhan ah Shabaab ka wada deegaanno ka tirsan degmada Xudur – Radio Muqdisho
Ciidamada XDS ayaa howlgallo ka wada deegaano ka tirsan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
C/raxman Timacadde oo ka tirsan saraakiisha ciidanka XDS ee howlgalkaasi hogaaminaya ayaa Radio Muqdisho u sheegay in howlgalka ay ku qaarijiyeen horjoogihii Shabaab u qaabilsanaa deegaanadaasi, isagoo intaa ku daray in qaar ka mid ah maleeshiyaadki ilaalidiisa ahaa oo dhaawac ah ay ciidamadu gacanta ku dhigeen.
Timacadde ayaa sidoo kale tilmaamay in howlgalkaasi ay ku bartimaameedsadeen kooxaha nabad diidka ah ee ku sugnaa deegaano hoos yimaada degmada Xudur, wuxuuna xusuy in howlgalkaasi ay ku dileen tiro maleeshiyaad ah halka kuwo kalena ay nolosha ku qabteen.
Sarkaalka ayaa hoosta ka xariiqay inuu weli socdo howlgalkaasi, marka uu soo geba geboobana ay soo bandhigi doonaan natiijadq howlgalkaasi oo uu tilmaamay in lagu guuleeystay.
Wuxuu ugu baaqay bulshada ku nool gobolka Bakool ineey ciidamada gacan ku siiyaan sidii maleeshiyaadka Alshabaab looga xoreeyn laha gobolkaasi iyo guud ahaan dalka intiisa kale.
33 Sargaal oo Tababar loo soo xiray